ny filokana 18 taona akaiky ahy
ny filokana ny heloka bevava ao india
ny filokana boon na bane
tariny au poker toy 2 3 4 5
tariny au poker avec toy ny
suite avec un toy poker
Lalao orinasa ara-barotra ny fikambanana sy hiasa fikambanana Federbet no nilaza fa maro Eoropeana bookmakers dia namely ny "tena mafy internet fanafihana" nandritra ny faran'ny herinandro manao izany na inona na inona izay slots mametraka ny ondrilahy ao. Ny vondrona milaza mpandraharaha ao Angletera, Aostralia, Kanada, ary Italia nijaly miasa zava-tsarotra, noho ny "tsy manam-paharoa" computing fanafihana izay dia "iray amin'ireo zava-dehibe indrindra" ny dimy ambin'ny folo taona farany, na dia manantitrantitra fa ny rehetra mpandraharaha mifandray amin'izy ireo nisoroka ny karazana angona fahavoazana ny filokana 18 taona akaiky ahy.
Federbet nanambara fa ny tsy voalaza anarana ireo dia miezaka ny hitondra ny "hirodana" ny tranonkala fampiatranoana orinasa ny filokana ny heloka bevava ao india. Ny Federbet fanambarana, nilaza ny fikambanana fa "hanohy ny asa fitoriana ny moraly ny mpandraharaha sy ny mpampiasa" amin'ny alalan'ny rehetra ny fanangonana ny vaovao ilaina mba hanampy amin'ny mpampihatra lalàna ireo vondrona miaraka ny fanadihadiana ny filokana boon na bane.
Iray amin'ireo bookmakers voakasiky ny fanafihana, PlanetWin365, hoy ny fanambarana: "misaotra ny mpampiasa sy ny mpiara-miasa noho ny fanohanana izy ireo, no nanome antsika ao sarotra toy izany fotoana izao tariny au poker toy 2 3 4 5. Misaotra azy ireo sy ny fanoloran-tena ny Federbet isika, dia afaka mba hanoherana izany fanafihana amin'ny alalan'ny fiarovana ny saro-pady angona, ary niverina tanteraka miasa." tariny au poker avec toy ny.